Nhau - Tsika yeMarathon Zvigadzirwa Uye zvishongedzo
Kana zvasvika pakuedza kwekuyedza uye zviitiko, marathons ari pakati pesarudzo dzakakurumbira kunze uko. Marathon inobvumira vamhanyi kuti varatidze simba ravo, kugona uye kuzvipira kune yavo yerudo kana mutsigiri wesarudzo nezvakajairwa marathon zvigadzirwa. Hapana chinhu chakangofanana nezuva rakasimba rekurovedza muviri kukurudzira vanhu kuti vape uye nekuwedzera uye vanhu vazhinji kuti vatore chikamu; kunyangwe iri yekubwinya, kutora chikamu kana kunyange mukana wekuhwina mushure memwedzi kana makore ekudzidzira.
Nemamarathoni akabata manyawi akasimba kune vanhu vazhinji, uye nemazana ezviuru zvevamhanyi vachipinda muzviitiko gore rega rega, hakuna kumbove nenguva iri nani yekukwiridzira kukwezva kwako kwekuona kune inotevera nhanho. Kune varongi vemarathon, kumira kunze kwevanhu vazhinji kuri kuramba kuchiwedzera kuoma; asi zvirokwazvo pane zvakawanda zvinogona kuitwa kuti zita rako rionekwe nekukasira kupokana nezvimwe zviitiko zviri kunze uko. Imwe nzira yakanakisa yekutanga ndeyekudyara zvipfeko zvakagadzirwa zvemwaka wezhizha marathon, kubva kutsika t-shirts kugadzira ako hoodie sarudzo.
Isu tinokudzwa kushandira pamwe neImbube Marathon sangano, ichipa akateedzana ezviitiko zvishongedzo zvine t-shirt, hoodi, polo shati, yunifomu yempemper, menduru, tauro ramarathon, masokisi, ngowani, mukombe, bhandi rebhande resilicone, chikwangwani, mireza yemasumbu, kuputira fenzi etc.
Nezve Imbube Marathon: Changamire, Mambo Mswati III vakave nemuono wepasi rose, chiitiko chinomhanya chinhambwe cheThe Kingdom of Eswatini. Eswatini National Provident Fund, pamwe chete nezviitiko zvikuru zvinotsigira Standard Bank Eswatini vanodada nekugona kuita chiitiko chakakurumbira ichi Svondo yega yega munaGumiguru (6 Gumiguru 2019).
Uri kufunga nezvekudyara mune yakasarudzika t-shirts kana zvishongedzo kune yako iri kuuya Marathon? Wobva wavaka Yako Yako Nguo ndiyo sevhisi yako. Gadzira yakasarudzika zvipfeko uye zvishongedzo izvo zvakanyatso kuenderana neako chiitiko chiratidzo, zvisina basa. Hapana kudikanwa kwemaitiro akaomarara, kureba kutendeuka kana kuvhiringidza masisitimu. Kukumbira mutengo wemasevhisi edu, taura nesu zvino.